WunZinMin Raja ဝန်ဇင်း မင်းရာဇာ: ပြည်တော်နာမည့် စီမံကိန်းများကို ရပ်ကြပါရန်ပန်ကြားခြင်း။
ပြည်တော်နာမည့် စီမံကိန်းများကို ရပ်ကြပါရန်ပန်ကြားခြင်း။
၁) အိမ်အကူအဖြစ် မြန်မာမိန်းကလေးများကို ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ပို့ ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စာရေးသူ ကျွှန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီထဲကပင် မလွှတ်စေလိုကြောင်း၊ အကြောင်းပြချက်များဖြင့် တင်ပြပြီး ဖြစ်ပါ၏။ “လူတင်ပါမှ နွားကျားကိုက်” ဆိုသည့် မြန်မာစကားဆိုရိုးရှိပါသည်။ အကယ်စင်စစ် မြန်မာမိန်းကလေးများကို ရောင်းကုန်သဖွယ် သဘောထားကာ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသို့ ပို့လိုသူများက မြန်မာစီးပွားရေးသမား ပွဲစားများ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ What is nationalism? အမည်ဖြင့် တင်ပြထားသော ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှု ကြပါ။
Click Here [What is Nationalism? ]
၂) အထွေထွေ အလုပ်သမားအဖြစ် အင်ဒီးယား နှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့မပို့ သင့်ပါ။ သူတို့ ၏ အလုပ်သမားများ ကိုပင် စင်္ကာပူနိုင်ငံကိုစေလွှတ် ၍ အောက်ခြေသိမ်း အလုပ်များလုပ်နေသည် ကိုတွေ့ ရသည့် အတွက် ထိုတိုင်းပြည်များတွင် ထိုက်တန်သော လုပ်အားခ မရနိုင်သည်မှာ ရာနှုန်းပြည့် သေချာပါသည်။
၃) တကယ်လုပ်သင့်သည်မှာကား၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများ ပပြောက်အောင်ဆောင်ရွှက်ပြီး နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်အောင်ဖန်တည်းခြင်း ဖြစ်၏။ သို့ မှသာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံလိုသူများက စိတ်ချယုံကြည်စွာ ဝင်လာရဲပေမည်။ အစဉ်အလာကြီးမားသည့် ဂျပန်နိုင်ငံက “National Panasonic – Masushita Coporation” သည် စက်ရုံတည်ဆောင်ပြီး ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ရန် လောလောဆယ်မှာ အစီအစဉ် မရှိဟု ဆို၏။ ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင် ကုမ်ပဏီကြီးများ မြန်မာပြည်တွင် အမှန်ပင် စက်ရုံ အလုပ်ရုံများဖွင့်လို သည်မှာသေချာ၏။ သို့ သော် စိတ်ချယုံကြည်နိုင်မှု မရှိသဖြင့် မလုပ်လိုသေးခြင်း ပင်ဖြစ်ပေမည်။ ယင်းတို့ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်အောင် နိုင်ငံတော် အစိုးရက ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှသာ အဆိုပါ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုမျိုးကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပေမည်။
ငါးပွက်ရာ ငါးစာချ ဆိုသကဲ့သို့သူများတိုင်းပြည်များက မဖွယ်ရာသော အကြောင်းများကြောင့် သူတို့ မိန်းကလေးများကို အိမ်အကူ (maid) အဖြစ် မလွှတ်တော့ဘူးဆိုတော့ မှ ကိုယ့်အတွက် အခွင့်ကောင်းဟု ယူဆကြသည့် ပွဲစားများကတော့ “ဘနဖူး သိုက်တူးမည့် လူစားများ” ဖြစ်ကြပါ၏။
အဘတို့ လည်း သတိကြီးကြီးထားကြပါ။ အဘတို့ကိုလည်း အနှီပွဲစားများ လှည့်စားကောင်း လှည့်စားနိုင်ပါသည်။ မြန်မာမိန်းကလေးများမှာတော့ စရိတ်စက (ပွဲစားခ၊လေယဉ်ခ စသည်)ကို အကြွေးစနစ်ဖြင့် ကြွေးတင်ပြီးမှ ကျွှန်ခံရန်သွားရခြင်းဖြစ်ပါ၏။ မိန်းခလေးများ ခမြာ ကိုယ့်စရိတ်ကိုပေး အကြွေးတင်ခံပြီးမှ ကျွှန်ခံရန်လာရခြင်း ဖြစ်၏။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မင်းတို့စဉ်းစားဆင်ခြင်တော်မူကြပါ။ မသင့်လျှော်သည်ကို တားဆီးနိုင်ရန်ဆောင်ကြဉ်းတော်မူကြပါ။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲမှာ လယ်သူမလေးများ ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါစေ။ အိမ်အကူတော့ မဖြစ်စေချင်ပါ။
ဆရာတော် အရှင်အဂ္ဂစာရ ဟောကြားတဲ့ တရားကိုနာပြီး လိုက်နာကျင့်ကြံကြပါ။
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 10:45 PM
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်များ ဟော်ကီအသင်းကို လွမ်းဆွတ်သတိရခြ...
အာဇာနည်နေ့ - ၁၉ ဇူလိုင်မမေ့နိုင်
ပြည်တော်နာမည့် စီမံကိန်းများကို ရပ်ကြပါရန်ပန်ကြာြး...